Qarax ka dhacey masjid ku yaal magaalada addis-ababa oo ay ku dhaawacmeen 24 qof. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home facebook.com Qarax ka dhacey masjid ku yaal magaalada addis-ababa oo ay ku dhaawacmeen...
Ugu yaraan 24-ruux ayaa ku dhaawacmay Qarax bam oo lagu weeraray masjid ku yaalla magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, maq-ribnimadii shalay oo Jimco ahayd, afar ka mid ah dhaawacyada ayaa la sheegay inay yihiin kuwo culus, sida ay sheegtay xukuumadda Itoobiya.
Wasiirka warfaafinta xukumadda Itoobiya, Getachew Reda oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan weli ogeyn cida ka dambeysa qaraxan, balse wuxuu sheegay inay socdaan baaritaanno ku aaddan qaraxa iyo ciddii mas’uulka ka ahayd.
Masjidka qaraxa lagu weeraray oo ku yaalla bartamaha magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa waxaa lagu magacaabaa Masjidka Anwar, waxaana lagu tuuray bambaano xilli lagu tukanayay salaadda maqribka.
Xukuumadda Itoobiya ayaa waxay ciidamo dagaal kula jira Al-shabaab kaga sugan yihiin Somalia, kuwaasoo qayb ka ah howlgalka ururka Midowga Afrika ee Somalia [AMISOM], iyagoo ka howlgala gobollada ku yaalla Koonfurta Somalia.
Sidoo kale, Al-shabaab ayaa waxay horay u weerartay dalalka Uganda, Kenya iyo Jabuuti oo ay ciidammo kaga sugan yihiin Somalia, kuwaasoo dowladda ay caalamku taageersan ee awoodda daran gacan ka siinaya dagaallada ay kula jirto Al-shabaab.
Dowladda Itoobiya ayaa waxay horay xir-xirtay muslimiin badan oo ay ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjiriinta ah ee caalamka, iyadoo 18-kii ruux ee u dambeeyay bishii Ogoosto ee sannadkan ku ridday xukun, kaddib markii ay ku eedeysay inay ka tirsan yihiin kooxda ISIS ama Daacish.
Ugu dambeyn, Muslimiinta Dalka Itoobiya ayaa waxay tan iyo sannadkii 2011-kii waxay wadeen dibadbaxyo; iyagoo dowladda Addis Ababa ku eedeeyay inay fara-gelin ku hayso diintooda Islaamka.
Previous articleDadka reer kenya oo u dabaal degey maalinta xoriyada konton iyo labo guuradii kasoo wareegtey.
Next articleBandhiga hanaanka loo dhanyahey oo in ka badan 25 xisbi siyaasadeed ay soo hor dhigeen 500 qof magaalada Muqdisho.